Forex Trading လုပ်ဖို့က လွယ်ပါတယ်… – Sonic Generation
💢 Professional Trader တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ဖို့ကတော့…. ခက်ပါတယ်။ 💢
✅Trading ပြုလုပ်ဖို့ Strategy ဆိုတာ 10% ဘဲ အရေးပါ ပါတယ်။ အဲ့ဒီ 10% ရဲ့နောက်ကို လိုက်ရင်းနဲ့ နောက်က အရေးကြီးတဲ့ 90% ဆီ မရောက်ကြဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။
✅ Strategy တွေ ဘယ်လောက်ဘဲ ပိုင်နိုင်ပါစေ။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက် (၅) ချက်ကို မသိသေးရင်တော့ မိတ်ဆွေဟာ အောင်မြင်တဲ့ Professional Forex Trader တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်နိုင်ဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
What is Professional Mindset and Business Mindset?
What is business concept and business plan?
How to make practices to profit?
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်(5)ချက်အပြင် High Potential ဖြစ်တဲ့ Trade Setup တွေ ရဖို့ Strategy တွေကို ဘယ်လို Tools တွေကိုသုံးပြီး ဘယ်လိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုတာ အသေးစိပ် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Forex & Gold Market မှာ Professional Trader တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ချင်သူတွေအတွက် လူတိုင်းမသိသေးတဲ့ အခြေခံ အချက်တွေအပြင် မိတ်ဆွေရဲ့ လက်ရှိ Profit ကို တိုးသွားစေမယ့် နည်းလမ်းများစွာကို အလွယ်ကူဆုံး၊ အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းတွေနဲ့ သင်ကြားပေး သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကြေး (၄) သိန်းကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။
(25-06-2019) ရက်နေ့မတိုင်မီ သင်တန်းအပ်သူတွေ အတွက် Online Coaching Session4ကြိမ်( ကျပ် 1သိန်းတန် ) ကို အခမဲ့ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းချိန်ကတစ်ရက်ကို (၃) နာရီ နဲ့ သင်တန်းရက် (၄) ရက် ဖြစ်ပါတယ်။
🔯🔯 Very Limited Seat. 🔯🔯
Forex သင်တန်းအများကြီးတက်ဖူးတယ် ဒီသင်တန်းက တကယ်ကိုရိုးရှင်းပြီး Strategy ကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချတတ်အောင်လမ်းပြပေးတယ် Risk & Reward Management ကို နားလည်ခဲ့တယ် Basic++ & Professional Course နှစ်ခုလုံးတက်ဖြစ်လိုက်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်
ကျေးဇူးပါ Sir KO THANT
သင်တန်းအပ်ခဲ့တာကတော့ Professional course အတွက်ပါ ဒါပေမယ့် သင်တန်းဆရာလမ်းညွှန်မှု့နဲ့ Basic ကနေပြန်လည်တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်
ပေးရတဲ့သင်တန်းကြေးထက် ပြန်ရလိုက်တဲ့ ပညာကအများကြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်
ကိုယ်သိထား ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အမှားတွေကို ဝေဖန်ထောက်ပြအကြံပြုဆွေးနွေးချက်တွေက အောင်မြင်မှု့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ရောက်စေမယ့် လမ်းအမှန်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ လက်တွဲခေါ်ယူ သင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာ ကိုသန့်၊ ကိုလွင်မိုးထူး တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Aung Pyae SoneOo
Forex တက်ဖူးတဲ့သင်တန်းတွေထဲကမှ အကျိုးရှိဆုံးသင်တန်းပါဗျ ! Candle pattern ကအစ Market ရဲ့ Supply Demand အဆုံး အကုန်နားလည်ခဲ့ပါတယ် 😁
ရှေ့ဆက်လဲ ပိုဝေမျှနိင်ပါစေ Bro တို့ 👍👍👍👍
153/159, Bogyoke Aung San Road (corner of 46th street), Botahtaung, Yangon
06-07-2019 (Sat) – 2:30PM – 5:30PM
07-07-2019 (Sun) – 2:30PM – 5:30PM
08-07-2019 (Mon) – 5:30PM – 8:30PM
09-07-2019 (Tue) – 5:30PM – 8:30PM
Very Limited Seat! ဖြစ်ပါတယ်!!!
Total Website Visits: 300096